«Festival Somarôho!”: hampiara-peo tsy ho ela i Wawa sy i Diamond | NewsMada
«Festival Somarôho!”: hampiara-peo tsy ho ela i Wawa sy i Diamond
“Io izy fa tonga”, hoy i Wawa. Fanamby lehibe napetrany amin’ireo mpijery tamin’ny taon-dasa ny fahatongavan’i Diamond Platnumz tany Nosy Be, nandritra ny “Somarôho!”.
Samy nanana ny hanitra ho azy! Efa niaka-tsehatra avokoa ireo mpanakanto vahiny nasain’i Wawa handray anjara amin’ny “Sômarôho”. Samy nandrasan’ny mponin’i Nosy Be ihany koa izy ireo, ary efa am-bolana maro izany.
Tsara ny tolotr’i Daphne. Namerina ny tsiahin’ny mpankafy tany amin’ny taona lasa nivalona tany ry One People Band, tarika natsangan’i Lucky Dube, ka namerina ireo hira nahafantarana azy rehetra. Tsy nisy nipika satria tarika manontolo ary matihanina tanteraka izy ireo. Nanaovan’ny One People Band “surprise” i Wawa satria nianaran’izy ireo an-tsokosoko ilay hira reggae an’i Wawa ka nasain’izy ireo niakatra an-tsehatra izy tompony nihira azy. “Tsy maty i Lucky Dube fa velona amin’ny alalan’ireto manohy ny adiny ireto”, hoy ity mpanakanto tompon’ny fanasana ity.
Ny alin’ny asabotsy, vao mainka hipoka olona ny kianjan’Ambodivoanio. Tamin’io tokoa mantsy no niandrasan’ny maro ilay mpanakanto tanzanianina, i Diamond Platnumz. Vao niaka-tsehatra i Diamond, nanahirana ny fihazonana ireo mpijery tsy hanatona akaiky ny sehatra. Horakoraka sy antsoantso tsy nifandrenesana satria efa hain’ireo mpankafy nialoha ny seho ireo hiran’ity mpanakanto ity. Na tsy hay aza ny fiteniny, tsy nifanalavitra amin’ireo gadona mihetsika ankafizin’ny mponin’i Nosy Be kosa ny nentin-dry Diamond sy ny tariny.
“Manambara aminareo aho fa hisy ny fiaraha-mihira ataonay sy i Wawa ato ho ato”, hoy Diamond teny an-tsehatra. Lalana hafa misokatra ho azy mirahalahy, izay samy mamakivaky ny tsenan’ny mozika iraisam-pirenena, indray io. Noho ny hafaliany, tsy tana i Wawa nandray ny amponga maroanaka ka nanaraka nifampizara talenta tamin’ireto vahininy ireto.
Fa tsy ireo mpanakanto vahiny ihany anefa no tena nahatongavan’ireo mpijery tao amin’ny kianjan’Ambodivoanio. Maro koa ireo mpanakanto malagasy tena nisongadina sy nankafizin’ny maro. Anisan’ireny i Lico Kininike, ny Grand Maître Tianjama, i Stéphanie sy Zara, i Tence Mena, i Janga Ratah, sns. Hatramin’ny nanombohany, tsy mifarana ny seho raha tsy efa maraina mihitsy ny andro. Tsy misy miala ihany koa ireo mpijery fa miharitra hatramin’ny farany. Hotaterina amintsika manaraka ny seho famaranana, izay nataon’i Wawa, omaly.